TÜBİTAK ga-ewere ndị ọrụ | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụTÜBİTAK ga-ewere ndị ọrụ
tubitak ga-ewere ndị ọrụ
TÜBİTAK ga - ewere ndị ọrụ; Isi nke Scientific na nkà na ụzụ Research Council of Turkey (TUBITAK) ka a tọhapụrụ na mgbasa ozi iji wee n'oru mkpara. Na mpaghara Kocaeli, a ga-ewe ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ.
TÜBİTAK bipụtara ọkwa ọhụrụ dị ka ọnwa nke ọnwa Disemba. Dabere na ọkwa a bipụtara na mpaghara Kocaeli maka TÜBİTAK BİLGEM 2 a ga-eji ndị ọrụ ohere zụta. Ndi umu akwukwo agha aghaghi inwe iru-aha a kaputere tupu ha etinye akwukwo.
AKWOCKWỌ AKW !KWỌ NTỌ!
Turkey Scientific na nkà na ụzụ Research Institution biis na Ozi Security Advanced Technologies malitere ngwa usoro maka mbanye Research Center. Achọrọ ka itinye akwụkwọ anamachọihe ha site na 27 Disemba 2019 n'oge ọhụụ. Adresị weebụ gọọmentị, TÜBİTAK, anam maka itinye akwụkwọ anamachọihe ahụ.kariyer.sage.tubitak.gov.t bụ).
MGBE MGBE AHỤRỤ
a) Itinye akwụkwọ maka İlan mgbasa ozi ahụwww.bilgem.tubitak.gov.t bụYoukwesịrị ịdebanye aha na sistemụ ntinye akwụkwọ Job. (Mgbe ị na -eme CV maka ngwa ahụ, aga-etinyerịrị akwụkwọ niile achọrọ na sistemụ elektrọnik wee bụrụ itinye ngwa site na ịhọrọ koodu nrịba ama). Ewezuga ngwa sitere na Sistemụ Ngwa Job
Agaghị anabata akwụkwọ anamachọihe ahụ.
b) Ekwesịrị itinye akwụkwọ anamachọ ihe ọzọ 27 / 12 / 2019: 17: 00.
c) A ga-enyocha ngwa site na koodu nzipu mgbasa ozi. Ndi umu akwukwo n’enye ha ike itinye ahihia site n’edoro oru ndi ozo. Agaghị atụle akwụkwọ anamachọpụtaghị koodu akwụkwọ maka ya.
d) A ga-akpọ ajụjụ ọnụ ndị gbara akwụkwọ dịka oge 10 ọnụọgụ ndị ọrụ a ga-eme site na akara kachasị elu dabere na (e) ngalaba nke “Ọnọdụ Ọnọdụ A Ga -achọ Maka Ndị Ntuli Aka”. Dabere na f (f) ngalaba Koşullar Ọnọdụ Ọnọdụ maka Ndị Ntinye Aka, a na-enweta akara ngosi kachasị elu maka ndị a na-aga ime nwere akara mmụta PhD n'ọhịa.
Na mgbakwunye, 10 ugboro ole ndị ọrụ ga - ewelata aha ha n'ọkwá ga-agwa ajụjụ ọnụ a. Ọ bụrụ na enwere ndị ndọrọndọrọ ndị ọzọ nwere akara dị ka ndị ikpeazụ ga-aga, a ga-akpọkwa ndị a na-aga ime maka ajụjụ ọnụ.
e) Nkeji edemede (e) nke Koşullar Ọnọdụ Ọnọdụ A Ga -achọ Maka Ndị Ntuli Aka, maka ndị aga-agụta akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ na mba ofesi, na (e) na (f) nke General General Ọnọdụ Searchchọ Ndị Ọchịchị Doktora maka ndị chọrọ ịga akwụkwọ Ph.D. a ga-enyocha ndị chọrọ.
f) A ga-enyocha ndị aga-eme nyocha dabere na nkwupụta ha abanyela na ntinye akwụkwọ ọrụ n'oge ngwa ha,
TÜBİTAK SAGE Project Staff (Injinia na R & D Teknụzụ)
TUBITAK Na - eme njem na 2023 Vision (Video)
Ntinye akwụkwọ TUBITAK